Boeing 717 Bilood 4 6 maalmood ka hor #1697
Kaliya waxaad soo dejisay 717, diyaarad aad ufiican oo duulisa, fadlan ma hagaajin kartaa badhtamaha culayska?
Boeing 717 Bilood 4 1 maalin ka hor #1700
Hagaag taasi waa mid sahlan oo waadna sameyn kartaa adigu. Gali faylka diyaaradda, oo fiiri halka ay ku sugan yihiin rakaabka
xirmay. Waxaad ku arki doontaa tiro aad u badan qolka weyn ee guriga. waxaan usheegaynaa qaybta dambe inay leeyihiin 11,000 rodol oo culeys ah.
Kaliya beddel lambarkaas si aad u tidhaahdo 5000, taasina waxay u sii qaadi doontaa cg fog si ay isugu dheelitirto diyaaradda. Ama u tag faylka diyaaradda markaad riixdo alt. U wareeji Shidaalka iyo lacag bixinta. Lambarro isku mid ah ayaa halkaa ku jiri doona. Had iyo jeer ka soo qaad duullimaadka dabada hore, maadaama aadan dooneynin inaad u duusho duullimaad culus. Sidookale hadaan duulayo qiyaastii 200 oo mayl waxaan ku qaadaa xoogaa shidaalka taangiga dhexe sida 70.0. Ku shub shidaalka haanta dhexe. Noo soo sheeg sida aad u sameysay. Ugaarsi, nooca, duul duul.
Boeing 717 bilood 4 16 hours ago #1701
haddii aan si sax ah u fahmay, ka dib markaan doorto Diyaaradda FSX Waa inaan beddelaa rakaabka iyo sida loo xayiro, sifiican ayaan u qabtay laakiin waxbadan iskama badalo GOG waa ilaa diyaaradda horteeda, waxaan u maleynayaa inaad arintaan xallinayso waa inaad gasho faylka cfg khabiirna kuma lihi inaan sameeyo.
Boeing 717 bilood 4 10 hours ago #1702
Ii sheeg 717 aad haysato si aan u fiiriyo. Hubso inaad kujirto heerka miisaanka iyo isku dheelitirka. Hadaad culeys qaado
culeyska iyo dheelitirka waa inaad ka soo saartaa culeyska culus sidoo kale. Waxaan ula jeedaa inaad hagaajiso miisaanka guud, haddii kale
kuma kala duwana sida ay u duulayso.
Boeing 717 bilood 4 9 hours ago #1703
Hadday isku mid tahay Rikooo wow !! Daawashada fadhiga. Waad ogtahay mararka qaarkood waxaan isweydiiyaa halka qaar kuwan ka mid ah
barnaamijyadeena waxay ka helaan macluumaadkooda. Ninkani aad buu uga fog yahay macnaha guud ee ma aaminsani karo. Kursiga 500sin ee hore, iyo 5 illaa 7000
kuraasta gadaal. Marka loo eego markay diyaaraddu dhulka ka baxdo waa inay bilaabataa ku dul boodboodinta dabada dusheeda. Waayo
qiyaastii 25 sano ayaan dhisay oo duushay 1/4 qiyaasta diyaaradaha RC. CG waxay ahayd inay ahaato lacagta haddii kale markii ay hawada qaadatay waxay luntay qiyaastii 2-5 kun oo doolar. Waxa kale ee aan ka dacwoonayaa waa biriiga. Waxaad arki doontaa biriiga = 00056 ama 1.0. Xitaa haddii gadaal loo riixo, ma joojin doontid diyaaradda soo degta 140-`150 MPH. 717 waa inay noqotaa ugu yaraan 1.70. Waa inaad sidoo kale fursad u siisaa culeyska ugu badan sidoo kale.
Boeing 717 bilood 4 8 hours ago #1704
Boeing 717 200 laga soo degay Rikooo: www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/55/748 .